Mbudzi. Kusarudzwa kwezvinhu zvitsva | Current Literature
Mbudzi. Kusarudzwa kwezvinhu zvitsva
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 01/11/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 23/10/2021 14:03 | Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel
November, mwedzi wekupedzisira wegore. Ichi chimwe kusarudzwa kwezvinhu zvitsva zvinyorwa zvinobuda. Zvese zvinonaka uye zvakasainwa na Ken Follet, Lorena Franco, Luis Roso, Luca D'Andrea, Pam Jenoff naCharlotte Link. Isu tinotarisa.
1 Mukadzi ane Blue Star - Pam Jenoff
3 Zvisungo zvePasi - Charlotte Link
4 Madhimoni ese - Luis Roso
5 Never - Ken Follett
6 Mazuva Asara - Lorena Franco
Mukadzi ane blue star - Pam Jenoff
Munyori we Vasikana Vasipo veParis y Ngoro yeNherera inoburitsa iyi nyaya itsva yakaiswa mukati 1942. Nyeredzi Sadie gault, musikana ane makore gumi nemasere okukura uyo, pamwe chete nevabereki vake, vanofanira kutiza apo ivo Nazi paradza ghetto re Krakow kwavanogara. Vanopotera mumapombi uye kubva ipapo rimwe zuva Sadie, achitarisa nepagure, anoona musikana wezera rake achitenga maruva anomuwanawo. Inonzi Elle stepanek uye anogara zvakanaka nekuda kwaamai vake vokurera, mushandirwi wemaGermany. Elle naSadie vanova shamwari, asi mamiriro acho ezvinhu akaoma uye hondo ichavaisa pamuedzo.
Luca D'Andrea Akave mumwe wevanyori vane mukurumbira vekuItaly verudzi rwevatema. Zvino buditsa iyi zita idzva rinogara muchando che 1974. Inotamba mumwe mukadzi wechidiki anonzi Marlene ndiani anoona kuti ndiye nepamuviri Herr Wegener, murume wake uye murume aityiwa zvakanyanya muTyrol yese. Sarudza kutiza nokuti unoda kurera mwana wako kure nemhirizhonga, asi mukuita kudaro anoita tsaona yemotokari yaanoponesa Simon keller, murimi anogara nenzira yechinyakare yaTyrolean uye anoenda naye kupurazi rake riri kure kuti amuchengete.
Nguva Wegener Anotsvaka mudzimai wake kuti achengetedze mukurumbira wake nesangano rematsotsi rine simba raanopinda. Achatumira a sicario zita remadunhurirwa rekuti Man of Confidence, asingamire kusvika apedza basa rake. Asi chokwadi ndechekuti Marlene haazive kuti ndeipi kutyisidzira kwakaipisisa: murume wake, anorova kana lissy, chakavanzika papurazi raKeller.
Zvisungo zvepasi - Charlotte Link
Zvinouya chikamu chechitatu de Mwaka wemadutu, iyo inonyanya kufarirwa uye yakatevedzwa saga yemhuri yemunyori wechiGerman uyu.
The protagonist, Felicia lavergneAnoramba achiita bhizimisi rake asi anoziva kuti munguva pfupi inotevera achafanira kupa basa kune vechidiki. Asi vanasikana vake havasati vagadzirira kutakura nhaka yake. Belle Akagara muUnited States kubva pakapera Hondo Yenyika II asi haana kumbobvira ajairana nenyika iyoyo. Susanne Anogara kure nevanasikana vake vaasina kukwanisa kurarama navo nekushungurudzika kwemurume uye baba vemhondi yehondo yeNazi. Zvichazova Alexandra Mutevere mumatsimba ambuya vake. Asi imwe njodzi isingatarisirwi zvichashandura zvese.
Madhimoni ose - Luis Roso
Louis rosso dzosera inspector Ernesto trevejo, hunhu hwakamupa kubudirira uye ndiani ane nyeredzi Kunaya kwemvura y Chitubu chine utsinye.
Tiri muzhizha re 1960 uye mukuru mukuru kubva kusangano rehurumende reGermany anopondwa muMadrid. Hurumende yeSpain inoedza kudzivirira chiitiko chezvematongerwo enyika uye inopa nyaya yacho kuna Trevejo. Izvi, zvichiperekedzwa neasinganzwisisike purofesa wekuAmerica, achaongorora kwakabva a bhokisi inoratidzwa mune imwe museum muZurich, inoita kunge ndiyo kiyi yekupara mhosva. Asi, asingazvifungidzire, achazviwana akabatanidzwa mune imwe yezvitema zvakanyanya zvehutongi hwaFranco: iyo VaNazi vanotiza vapoteri muSpain kubva pakupera kweHondo Yenyika Yechipiri.
Kwete - Ken Follett
Ko kana dambudziko risati ramboitika repasi rose richityisidzira kutiisa pamasuwo e Hondo Yenyika Yechitatu? Zvakanaka ndizvo zvinosimudza Ken Follett mune ino vhezheni nyowani, uko mhando yenhoroondo inomisa zvishoma uye inotora anonakidza. Iwo ma protagonists ndea boka revanhu vakazvipira uye vakatsunga uyo achafanira kurwa munhangemutange nguva kubva kumativi akasiyana enyika.
Mazuva asara - Lorena Franco
24 of noviembre
Lorena Franco anoenderera mberi asingamisiki mubasa rake rekunyora uye anowedzera iri zita idzva kwaari kare refu trajectory kubvira payakatanga kunyorwa paAmazon uye yakawana budiriro isati yamboitika nayo Mufambi wenguva. Zvino chipa nyaya iyi akaiswa kumaruwa Catalonia.
Nyeredzi Olivia, anoshanda muchirongwa chakakosha cheparanormal chiitiko munyika. Makore makumi maviri mushure mekupedzisira kufa kwamai vake, chokwadi chakaratidza hupenyu hwake, uye kushungurudzwa nezvinoshamisa kutsakatika kwaAbheri, mukomana wake uye mushandi biyake, muAokigahara, sango rinoshamisa rokuzviuraya rokuJapan, anotambura a ngozi izvo zvinomusiya achipinda coma mazuva mashoma. Pakumuka anobva afunga kudzokera kumusha kwake. Llers, rinozivikanwa setaundi revaroyi. Ikoko achasangana zvakare neshamwari dzake dzechidiki uye nerudo rwake rwekutanga, Ivan, ave mutori wenhau ane mukurumbira, waanozoongorora zvekare zvaLler uye zvikonzero chaizvo zvakakonzera kufa kwaamai vake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mbudzi. Kusarudzwa kwezvinhu zvitsva